Firxadkii qaar ka mid ah Wasiiraddi Cabdi Iley oo magaalada Hargeysa lagu qabtay. – Xeernews24
Firxadkii qaar ka mid ah Wasiiraddi Cabdi Iley oo magaalada Hargeysa lagu qabtay.
23. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciidammada ammaanka ee Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa gegeeda diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ka qabtay labo wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar, Sida uu war baahinta u xaqiijiyay sarkaal ka tirsan wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Labadan wasiir ayaa kala ah wasiirkii hore ee waxbarashada;
Ibraahim Aadan Mahad oo ku magac dheer Ibraahim Sacab,
iyo wasiirkii caddaaladda Cabdi Jamaal Axmed Qaloonbi.
Sarkaalkaas ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Somaliland ayaa sheegay in labada wasiir loo haysto in ay si dhuumasho ah ku soo galeen iyaga oon dal ku gal wadanin, isla markaasna ay rabeen in ay garoonka magaalada Hargeysa ugu duulaan si dhuumasho ah.
Faahfaahin intaas ka baxsan ma aysan bixinin, balse war baahinta madaxa banaan ayaa ogaatay in ay kusii jeedaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
warar kale ayaa tibaaxaya in Wasiiradan ayaa la xaqiijiyay in magaalada Hargeysa ay ku dhuumaaleysanayeen muddo todobaad ah, hase yeeshee markii danbe lagu qabtay Garoonka xili ay sii dhuumanayeen.
Wasiiradan ayaa baxsad u ahaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaalia sidda ay xaqiijiyeen laamaha amaanka hase yeeshee waxaa Dukumiintiyadooda fashiliyay ciidamada.
Laamaha amaanka ayaa Wasiirada weydiiyay su’aalo la xidhiidha sharciga iyo aqoonsiga ay sitaan, kadibna waxay sheegteen inay yihiin ganacsato xoolaha ka ganacsata.
Muddooyinkii u dambeeyay waxa gudaha maamulka Somaliland soo gaadhayay dadka kasoo cararayay rabshadihii magaalada Jigjiga ka dhacay, kuwaasi oo qaarkood ay lasoo baxsadeen hanti oo maamulka Somaliland gacanta ku dhigtay.
Dhawaan ayay aheyd markii maamulka Somaliland uu ka digay in mas’uuliyiin iyo Saraakiil ka tirsan maamulka Soomaalida Ethiopia sharci daro kusoo galaan Somaliland.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/Hargeysa-Airport.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-23 09:54:502018-08-23 09:54:50Firxadkii qaar ka mid ah Wasiiraddi Cabdi Iley oo magaalada Hargeysa lagu qabtay.
Dhegeyso Waraysi Hore oo Argagax leh oo Madaxwaynaha Cusub ee Kililka5aad Mustafe... Ra,iisul wasaare Abiy Axmed oo Qorshaynaaya inuu 1000 qof oo Soomaalida Itoobiya...